Ny agrarians ao amin'ny faritr'i Volgograd dia nanomboka ny lalan'ny mekanika - gazety "Potato System"
в vaovao, Vaovao momba ny faritra, Tekinika / teknolojia
Ny karaoty tara dia mijinja any amin'ny faritra Volgograd. Ao amin'ny iray amin'ireo toeram-pambolena ao amin'ny distrikan'i Sredneakhtubinsky, ny milina fambolena vaovao dia manampy amin'ny fanafainganana ny asa an-tsaha. Ny teknika dia natao ho fanandramana hanombanana ny fiantraikan'ny fanoloana ny asa tanana amin'ny mekanika. Karaoty mihozongozona eo amin`ny conveyor fehikibo, noho izany ny anaran`ny fitsipiky ny milina fijinjana - misintona.
Ny lanjan'ny legioma fototra dia eo amin'ny 170 grama. Ary izany dia na dia eo aza ny zava-misy fa noho ny lohataona mangatsiaka sy ny fahavaratra mafana tsy mahazatra, ny fotoana famafazana karaoty ao amin'ny toeram-pambolena dia niova tamin'ny herinandro 2-3.
Nitohy ny fanadiovana nandritra ny herinandro faharoa. Mikasa ny hijinja karaoty Cordoba 60 arivo taonina eo amin’ny velaran-tany 4 hektara ny toeram-pambolena.
Efa voajinja ny vokatra tongolo. Nahatratra 80 ha ity voly ity. Raha ny filazan’ireo mpamboly dia misy ny fahaverezan’ny vokatra noho ny tsy fahampian’ny mpiasa. Raha ny marina, ny tsy fahampian'izy ireo no anton'ny fifindrana mankany amin'ny mekanika amin'ny asa.
Ny ampahany amin'ny fijinjana karaoty tara dia efa napetraka ho fitahirizana maharitra. 700 taonina teo ho eo no napetraka tao amin’ny iray amin’ireo efitrano enina ao amin’ny trano fanatobiana legioma. Naorina tamin'ny taona 2016 izy io tamin'ny fandaniana ny orinasa. Ny rafitra fanaraha-maso ny rivotra maoderina, ny mari-pana ary ny hamandoana dia mamela ny vokatra ho voatahiry mandra-pahavaratra. Tsy ho ela dia ho eo amin'ny talantalan'ny rojom-pivarotana lehibe any Volgograd sy ireo tanàna hafa ao amin'ny firenena ny karaoty.
Tags: Faritra Volgogradtongolokaraotyfijinjana karaoty taracarrot storage